आजको राशिफल / वि.सं. २०७६ वैशाख ३१ गते मङ्गलबार – Taza Post
वि.सं. २०७६ वैशाख ३१ गते मङ्गलबार तदनुसार ई. सं. २०१९ मई १४ तारिख, वैशाख शुक्ल दशमी, पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र, सिंह राशिको चन्द्रमा, हर्षण योग, गर र वणिज करण, आजको चाडपर्व र उत्सव : ण्, आजको मूहुर्त : शुभविवाह, कलशचक्र, भोलिको चाडपर्व र उत्सव : मोहिनी एकादशी व्रत, ज्येष्ठ सङ्क्रान्ति, भोलिको मूहुर्त : अग्निवास(होमादि), पसल थाप्ने, शिलान्यास (सामान्य), गृहप्रवेश, घर छाउने÷ढलान गर्ने, डेरा सर्ने, दीक्षाग्रहण, कलशचक्र,
राहु काल : दिउँसो ०३:२२ देखि ०५:०३ सम्म, यमघण्ट : बिहान ०८:३९ देखि १०:२० सम्म, गुलिक काल : दिउँसो १२:०१ देखि ०१:४२ सम्म, काल वारवेला : दिउँसो ०१:४२ देखि ०३:२२ सम्म, रोग वारवेला : बिहान ०५:१८ देखि ०६:५९ सम्म र साँझ ०५:०३ देखि ०८:०३ सम्म, आजका लागि शुभकर्म प्रारम्भ गर्न उपयुक्त समय : लाभ वारवेला : बिहान १०:२० देखि १२:०१ सम्म, भोलि कतै यात्रा गर्ने उपयुक्त साइतको खोजीमा हुनुहुन्छ भने पुरुषको नेतृत्वमा पूर्व र दक्षिण दिशाको तथा स्त्रीको नेतृत्वमा वायव्य (उत्तरपश्चिम) र ईशान (उत्तरपूर्व) दिशाको यात्रा शुभ हुन्छ ।
तर बाध्यतावश यात्रामा निस्कनै पर्ने छ भने मिठाइ वा तिल खाएर जुनसुकै दिशाको यात्रा गरेमा पनि शुभफल प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ । पञ्चाङ्गखण्ड समाप्त भएको छ, यहाँ मैले प्रयोग गरेको समय नेपालको राष्ट्रिय समयमा आधारित समय हो । ठाउँअनुसार तिथि, नक्षत्रादि र नामाक्षरमा पनि समय अन्तर हुनेछ ।
चन्द्रमा राशिमा रहेकाले मनमा उत्साह, उमङ्ग र जाँगर रहने दिन छ । तर तपाईंको काममा आज कसैले सहयोग गर्ने सम्भावना छैन । मित्रवर्ग र बन्धुवान्धवले आआफ्ना बाध्यता तेर्साउन सक्छन् । नियमित भोजनको समेत अनुकूलता हुँदैन । पछाडि बसेर तपाईंका कुरा काट्नेहरूले खिसीट्यौरी गर्न छाड्दैनन् । पारिवारिक समस्या र उल्झनमा समय दिनु पर्नेछ । आर्थिक पक्ष सबल छैन, कुनै वस्तु खरिद गर्दा महँगोमा पर्न सक्नुहुन्छ । यद्यपि बन्दव्यापारबाट बेफाइदा हुँदैन । गरेका काम ढिलो गरी सम्पन्न हुनेछन् । नातागोताभित्रका विपरीतलिङ्गी सदस्यहरूको काम र समस्यामा रुमल्लिनु पर्ने समय छ ।
चन्द्रमा अनुकूल छैन, तर अन्य ग्रहको शुभ बल छ, त्यसैले आत्मबल र हौसला नत्यागे सफलता पाउनु हुनेछ । वहस र वादविवादमा विजय प्राप्त हुनेछ । परोपकारका क्षेत्रमा आकर्षण बढ्ने छ । नयाँ कामको वातावरण तैयार हुनेछ, अर्थलाभका अवसर आउने छन् । पारिवारिक जीवन सन्तोषप्रद रहने छ । बेलुकीपख मनमा हौसला जाग्नेछ, असन्तुष्टि समाप्त हुनेछन् । अधुरा कामहरू पूर्ण हुन थाल्नेछन् । स्वास्थ्यमा क्रमिक रूपमा सुधार हुनेछ । आध्यात्मिक र सामाजिक काममा सक्रिय बन्नु पर्नेछ । वादविवादमा विजय प्राप्त हुनेछ । परोपकारका क्षेत्रमा आकर्षण बढ्ने छ । बन्दव्यापारमा देखिएका समस्या हल हुनेछन् ।
घरायसी सम्बन्ध सुमधुर रहने छ । मातापिता र अभिभावकवर्गको सहानुभूति र आशीर्वाद प्राप्त हुनेछ । कर्मचारीले हाकिमलाई खुसी पार्न सक्छन् । ठूलाबडाको सहयोग र सल्लाहले राम्रो फाइदा लिन सकिने छ । सन्तानपक्षबाट सन्तुष्टि मिल्नेछ । व्यापार÷व्यवसायमा सोचेजति लाभ पाइने छ । आफ्नो क्षेत्रमा साख रहनेछ । धार्मिक÷सामाजिक र सांस्कृतिक क्रियाकलापमा सक्रिय भइनेछ । गरेका काममा सफलता पाइने छ । चिन्तनमूलक र बौद्धिक काममा समय निकाल्न सकिंदैन, तर श्रममूलक काममा फाइदा लिन सकिने छ । कर्मप्राप्ति र व्यवसायिक उन्नतिका लागि गरिएका प्रयास सफल हुनेछन् ।
के नगर्ने : स्वास्थ्यप्रति बेवास्ता (source)
Previous आजको राशिफल / वि.सं. २०७६ वैशाख ३० गते सोमबार
Next आजको राशिफल / वि.सं. २०७६ ज्येष्ठ ०१ गते बुधबार